Toby Akamasoa hoe misy mikasa hanafika: nihatrana teny Andralanitra ny Emmo/Reg | NewsMada
Toby Akamasoa hoe misy mikasa hanafika: nihatrana teny Andralanitra ny Emmo/Reg
Nandeha ny feo ny alin’ny alarobia teo, tokony ho tamin’ny 9 ora alina fa hisy hanafika ny toby Akamasoa eny Andralanitra, ary hoe hisy hamono ny mopera Pedro. Nihatrana teny an-toerana, iny alina iny, ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny Emmo/Reg
Voalaza tamin’izany fa misy fiara Sprinter miisa dimy feno olona mirongo fitaovam-piadiana hanafika. Iny alina iny ihany, nanao barazy avy hatrany ireo mponina teny an-toerana nanoloana izany. Niely haingana ny vaovao ary nahazo antso ny zandary avy eny Ambohimangakely, ary namonjy teny an-toerana.
Tonga teny an-toerana ny zandary ary efa feno olona avy amin’ny toby Akamasoa sy ireo mponina eny amin’ny manodidina.
Nandeha be ny resaka sy ny karazana savorovoro teny an-toerana ka olona marobe nilaza fa vonona hifanehatra amin’ireo milaza hanafika. Nisy mihitsy ny filazana fa nafenina ny mopera Pedro. Voatery niambina ny toby Akamasoa ny zandarimaria avy ao Ambohimangakely, nampian’ny Emmo/Reg Analamanga ary ny polisim-pirenena hatramin’ny 5 ora maraina omaly. Tsy nisy anefa ireo fiara voalaza, tsy nisy ny fanafihana io alina io, hatramin’ny omaly. “Tsaho naely ary nentina nanakorontanana saim-bahoaka fotsiny ny filazana, fa hisy hanafika io toby io”, hoy ny zandarimaria.
Na izany aza nisy ny fepetra noraisin’izy ireo ary efa nanokatra ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana.
Fotoana mampandaitra ny karazana fanakorontanana izao aorian’ny fifidianana izao. Taorian’ny fifidianana ity tranga ity, afakomaly alina, ka raha ny feo nandeha noho ny tsy fahazakan’ny sasany valim-pifidianana mahatonga ny resaka aely entina anakorontanana.
Mora tohiny ny olona amin’izao ka toe-javatra kely monja, mety hiteraka korontana. Misy rahateo ny mpanararaotra miezaka manao izany asa ratsy izany.
Manao antso amin’ny rehetra mba samy ho tony ny tompon’andraikitra mandrapivoakan’ny valim-pifidianana. Nanamafy ny fisafoana ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao.